An-kifonofono mahatonga honohono mamono… | NewsMada
An-kifonofono mahatonga honohono mamono…
Ny zaza, ny antitra, ny marina, hono, no mora andairan-teny; eny, na ny resaka tsy marina sy ny tsaho aza. Tato ho ato, nirongatra be ny tsaho, indrindra ny amin’ny aretina pesta. Sanatria, zaza ny olona na ny vahoaka, mora andairan’ny tsaho? Na antitra ka tsy maharaka loatra intsony ny tena zava-misy sy ny marina; eny, na marary aza, ka mipepipepy amin’izay reny na izay eritreritra fotsiny.
Loza iray, loza roa… Talohaloha teo, niely ny tsaho hoe: tena misy sa tsia ny aretina pesta? Tao aza ny sahy nilaza fa aretina foronin’ny fanjakana izany, na tsy mba ho tratran’izany ny tenany. Tsy mino matin’ny pesta, raha tsy avy mandevina? Nefa na ny maty aza, mbola nisy nifandroritana fa hoe tsy matin’ny pesta: azon’ny fianakaviana alevina am-pasan-drazana sa tsia? Misy fepetra arahina.
Amin’izao, eo ny tsaho amin’ny fisian’ny andian’olona otronin’ny mpitandro filaminana hoe manao vaksinina pesta any an-tsekoly. Samy manao izay efany sy afany manazava fa tsy marina ny fisian’ny vaksina pesta sy ny fanaovana izany ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga amin’ny fitondram-panjakana. Hatraiza ny fandraisan’ny vahoaka ifotony izay? Mba tsy ho fanerena fa tena faharesen-dahatra.
Ho hita eo ny fivoaran’ny raharaha, na ho soa na ho ratsy. Nahoana no andairan’ny tsaho ny olona amin’izao? Maro ny mety ho antony: eo, ohatra, ny hoe tsy tohinina ny maro noho ny fahasahiranana, be tebiteby lava, tsy mifampitoky, samy maka ho azy… Tsy vokatry ny fiheveran’ny mpitondra ny vahoaka ho toy ny zaza mandrakariva ihany koa ve izay? Tsy ilazana ny marina tokony ho fantany tsinona…
Toa lasa be fo ho azy amin’ny fiainana ny isam-batan’olona sy ny isan-tokantrano. Na tsy vitan’ny hoe tsy matoky intsony izay lazaina sy ataon’ny mpitondra izy amin’izany, fa manahy zavatra hafa aza? Loza iray, loza roa… Ahoana no hamerenan’ny mpitondra ny fitokisan’ny vahoaka azy? Tsy vitan’ny fampitandremana sy fandrahonana io, fa ny an-kifonofono no mahatonga ny honohono mamono…
Mbola atokisan’ny vahoaka ve ny mpitondra?